Tamberin’andraikitra, tamberin-tantara… | NewsMada
Par Taratra sur 01/09/2016
Hirahirain’ny mpitondra amin’izao toe-draharaha mafanafana ratsy izao ny hoe voafidim-bahoaka. Viraviraina amin’izany ny fanehoan-kevitry ny hafa mitaky ny fanaovana fifidianana mialoha ny fotoana.
Misasaka izao ny fe-potoam-piasana, mba vita sasaka ve ny fanamby sy ny fampanatenana tamin’ny fifidianana. Ny delestazy hoe hofoanana ao anatin’ny telo volana fotsiny aza, ohatra: telo taona tsy afaka ihany.
“Miandry ahy ianareo vahoaka malagasy amin’ny fanajana ny fampanantenana sy toky izay nomeko anareo. Fantatro loatra ny havesatry ny tenin’ny filoham-pirenena, satria izy no taratry ny firaisam-pirenena.“
Kabary fandaharanasan’ny filoha tamin’ny fianianany teny Mahamasina, ny 25 janoaray, io. Aiza izay eo? Mihalalina sy maharitra ny fahantram-bahoaka. Tsy mila porofoina be manahoana izany.
Mbola nampiany hoe: “Hiantehitra amin’ny toko telo mahamasa-nahandro mandrafitra ny fotodrafitrasako aho dia ny fandriampahalemana, ny fitsarana tsy mitanila, ary ny ady amin’ny kolikoly.”
Eo koa ny hoe: “Ny famerenana ny fifampitokisan’ny vahoaka sy ny fanjakana no hiantoka ny fandriampahalemana ho an’ny olona sy ny fananana mandritra ny fotoana rehetra.” Aiza izany rehetra ireny izao?
Misy antony ao matoa mampiaka-peo ny mpanao politika, firaisamonina sivily, fiangonana… Aiza ho aiza izay tamberin’andraikitry ny mpitondra amin’ny vahoaka? Tamberin’ny tsy mety teo aloha aza no be.
Inona no (h)atao amin’izay tsy mahavita ny asany? Na tsy mahatanteraka ny fanambiny sy ny fampanantenany… Tsy vitan’izany, minia bemarenina amin’izay mitaraina? Mazava ny tenin’ny Sefafi, ny 20 aogositra:
“Zon’ny mpampiasa ny mandroaka ny mpiasa tsy mahavita ny asany, azo tapahina ny fifanarahana nahitana fepetra tsy voahaja; ny mpanao politika irery angaha no afa-tsy milaza izay zava-bitany, ka ataony fialana ny hoe fampanantenana no nifidianana azy?“
Hahagaga raha misy ny fitakiana etsy sy eroa ny amin’ny fitadiavana mpiasa vaovao, fa tapitra ny fe-potoana fanaovana fanandramana?